प्रधानमन्त्रीज्यू ! सडकमा देखिएका यी को हुन् ? - Nepal Readers
Home » प्रधानमन्त्रीज्यू ! सडकमा देखिएका यी को हुन् ?
प्रधानमन्त्रीज्यू ! सडकमा देखिएका यी को हुन् ?
मेची-महाकाली सडक मानवमुक्क्त अभियान यात्राअन्तर्गत गत मंगलबार काठमाडौंका सडकबाट मानवसेवा आश्रमले ४० जनाको उद्धार गर्‍यो । पशुपति क्षेत्रबाट नौ बालबालिका र २९ जना अन्य सडक मानवलाई उद्धार गरेको थियो । पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने मानिसलाई लागेको थियो । अब पशुपति क्षेत्रमा सडक मानव देख्न पर्दैन । तर त्यसको भोलिपल्ट पनि सडक मानव र बालबालिका उस्तै अवस्थामा देखिएका छन् ।
पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएका बौद्ध नयाँबस्तीका भगवान पुडासैनीले अझै पनि सडक मानव उत्तिकै अवस्थामा रहेको बताए । उनले भने, ‘‘सडक बालबालिका झन् धेरै देखिन थालेका छन् । सडक बालबालिका बिहान-बेलुका सडकमै हुन्छन् । यसले पशुपतिमा दर्शन गर्न आउने मानिसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । पैसा माग्दै मानिसलाई झुन्डिन आउँछन् ती बालबालिका ।”
अझ यति मात्रै होइन, गत आइतबार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभागृहमा अपांगता भएका नागरिकका मागसहित साक्षात्कार कार्यक्रम भनेका थिए । पहिला जताततै सडक बालबालिका थिए । तर अहिले छैनन् । उनले आफू एक किसिमको अपांगता भएको सन्दर्भलाई जोड्दै यस्तो भनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा ‘खाते’ पनि छैनन् भनेका थिए । उनले भनेका थिए, “सरकारले अभिभावकको भूमिका खेलेको छ । हिजो सडकभरी बालबालिका हुन्थे । र उनिहरू खाते भनेर अपमानित हुन्थे । अहिले कुनै पनि नेपालीका छोराछोरीलाई खाते भनेको सुन्नु परेको छैन । हामी सडक बालबालिकालाई खाते हुन दिँदैनौं । यस्ता यावत प्रधानमन्त्रीका भाषण झुटा साबित भएका छन् । अझै पनि सडक मानव र सडक बालबालिकाको अवस्था उस्तै छ ।”
शिक्षाविद् तथा सामजिक अभियान्ता अजय अधिकारीका अनुसार लकडाउन खुलेयता सडक बालबालिका धेरै देखिन थालेका छन् । उनले भने, ‘‘सडक बालबालिका कसरी सडकमा आइपुगे भन्ने कुरा थाहा पाउन जरुरी छ । कतिपय बालबालिका आमाबुबाको रोजगारी गुमेको कारणले सडकमा आएका छन् । भने कतिपय न्युन आयश्रोतका कारण । सरकारले उद्धार गरीरहेको सडक बालबालिकालाई राज्यले हेरचाह गर्नुपर्छ । सडक मानव पनि सडकमा गीत गाएर गुजारा चलाउन बाध्य छन् । बौद्धनाथ, पशुपतिनाथ, स्वयम्भू, रत्नपार्क, नयाँबसपार्कलगायत सडक क्षेत्रमा सडक बालबालिका र मानव भेटिने गर्छन् ।”
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा सडक मानव र बालबालिकाले पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘बाह्‍य पर्यटक पशुपति घुम्न आउँदा नेपालका बालबालिका र सडक मानवको अवस्थाको सन्देश लिएर जान्छन् । धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका रुपमा परिचित क्षेत्रमा पर्यटन घट्ने गर्छन ।”
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले सडक बालबालिका र सडक अपांगता भएका मानवका समस्या मनन् गर्न गाह्रो भएको बताए । उनले भने, ‘‘प्रधानमन्त्रीज्यू ! सडकमा मागेर बस्न कसैलाई पनि रहर हुँदैन । सडक मानवले गीत गाएर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । यसरी मागरै जीवन निर्वाह गर्न नपरोस् । भाषणमा मात्रै सीमित भएर हुँदैन । आज बालबालिका भोलिका देश चलाउने मानिस हुन् । यिनीहरूको उचित व्यवस्थापन र शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी होस् ।”
मानवसेवा आश्रमका अभियान्ता रामजी अधिकारीका अनुसार पुस ७ गतेदेखि सुरु भएको मेची-महाकाली यात्राअन्तर्गत हालसम्म करिब ८०० जना सडक मानवको उद्धार गरिएको छ । उनले भने, ‘‘काठमाडौं क्षेत्रका सडकपेटी धार्मिक स्थल, मठमन्दिर पाटीपौवामा निरन्तर अनुगमन गर्नेछौं । सडक बालबालिकालाई बालबालिका खोलतलास केन्द्रको जिम्मा लगाएका छौं । बालबालिकाको पहिचान खुलेपछि पारिवारिक पुनर्मिलन गराइनेछ । नखुलेका बालबालिकालाई मानवसेवा आश्रममा राख्नेछ ।”
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पाँच सय ७४ जना (बालक चार सय ६५ सडक मानव १०९ जना बालिका) सडकमा रहेका बालबालिकाको उद्धार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संरक्षण तथा पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले जनाएको छ ।
परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन, २०७७ अनुसार उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये हाल सम्पर्क गृहमा रहेका दुई सय ५५ जना, सामाजिक केन्द्रमा रहेका ९९ जना, विभिन्न बालगृहमा संरक्षणमा ५० जना, पारिवारिक पुनर्मिलन भएका आठ सय दस जना, विभिन्न तालिममा पठाइएका १ सय ८४ र तालिम पछि ५९ जना रोजगारमा समेत संलग्न छन् ।
सडक बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा (४) मा जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ ।
नेपालको विभिन्न कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थाहरूले सडक बालबालिकाको सूचना सडकमा आएका बालबालिकाको उद्धार, परिवारिक सहयोग र पुनर्मिलन, मनोसामाजिक, मनोविमर्शलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका परिषद्ले जनाएको छ । बाह्रखरी
by मेनुका बस्नेत
सन् १९९० मा न्युयोर्कमा आयोजित एउटा पार्टी सकिएपछि हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टनले अभिनेत्री एनाबेला सिओरालाई उनको घरसम्म ड्रप गरिदिए...
के पूर्व सोभियत राज्य रूस र बेलारूसको एकिकरणको ढोका खुलेको हो?
जब राजा महेन्द्रले विपीलाई ‘स्तरहिन’ भाषाको चिठी लेखे…